पशुपतिनाथ मन्दिरमा विशेष पूजा हुने - Media Dabali
पशुपतिनाथ मन्दिरमा विशेष पूजा हुने
काठमाडौं – पशुपतिनाथ मन्दिरमा विशेष पूजा सुरू हुने भएको छ ।
कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेपछि गत वर्ष चैत पहिलो हप्तादेखि बन्द भएको विशेष पूजा फागुन २५ गतेदेखि पुनः खुल्ने भएको हो ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले महाशिवरात्रिको समय पारेर विशेष पूजा खुलाउन लागेको हो । कोषका कोषाध्यक्ष डा. मिलनकुमार थापाका अनुसार फागुन २५ गतेदेखि १ हजार १ सयदेखि २७ हजार रुपैयाँसम्मका विभिन्न किसिमका विशेष पूजा गर्न पाइने छ ।
फागुन २७ गते पर्ने शिवरात्रिका दिन भने ५ हजार १ सय र ११ हजारका २ किसिमका मात्र विशेष पूजा हुने उनले बताए । ५ हजार १ सयको पूजामा २ जना र ११ हजारको पूजामा ४ जना सहभागी हुन पाइने छ ।
केही दिनअघि मात्रै पशुपतिनाथ मन्दिरमा १०८ किलोग्राम सुनको जलहरी राखिएसँगै अघिल्लो वर्षको शिवरात्रीको तुलनामा यसपटक दर्शन गर्न आउने भक्तजनको संख्यामा उल्लेख्य बढोत्तरी हुने कोषाध्यक्ष डा. थापाले बताए ।
फागुन २५ गतेदेखि पशुपतिनाथसँगै रहेको वासुकि मन्दिर पनि खुल्ने भएको छ ।
आव २०७५/७६ मा विशेष पूजाबाट ९ करोड ४० लाख ९३ हजार १४७ रुपैयाँ उठेको थियो भने आव २०७६/७७ मा ६ करोड १ लाख ८९ हजार ४७५ रुपैयाँ उठेको थियो ।
पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्न नहुने कुरा कुतर्क हो : संयोजक थापा
पशुपतिनाथ क्षेत्र क्रिस्चियनको कब्जामा ? सर्वाेच्चको आदेशको उल्लंघन
आइतवार, चैत्र २९ २०७७०८:५३:२४